गर्मिमा राती राम्रो निद्राका लागि यस्ता खानेकुरा खानुहोस् - आर्थिक पाटी
गर्मिमा राती राम्रो निद्राका लागि यस्ता खानेकुरा खानुहोस्
२०७६-०४-१४ बिचार / प्रतिक्रिया
देशको खासगरी तराई क्षेत्रमा गर्मिको अषर देखिन थालेको छ । ‘लु’ का कारण धेरै मानिसहरु लाई समस्या झेल्नु परीरहेको छ । यस्तो समयमा सहि र सुपाच्य खाना खानु एकदमै आवस्यक हुन्छ । गर्मिको समयमा राती खाने खानामा विशेष ध्यान दिनु पर्छ ताकि शरीरमा कुनै प्रकारका समस्या नआओस् । गर्मिमा रातीको खाना जे पायो त्यहि खानु हुदैन । बरु यस्तो खाना खानु पर्छ, जसले शरीरमा तरलता आाउनुका साथै गर्मिको प्रकोपबाट पनि राहत प्रदान गरोस । कयौं पटक धेरै खाना खानाले रातीमा विसन्चो हुनुका साथै राम्रो सँग निद्रा पनि लाग्दैन । गर्मिको समयमा राती खादा शरीरलाई लाभ पुग्ने केहि खाद्य पर्दथका बारेमा हामीले जानकारी दिन गईरहेका छौ । यस्ता खाद्य पदार्थ खानाले शरीर कमजोर नहुनुका साथै तरलता पनि रहिरहन्छ । गर्मि मौसममा खानु पर्ने केहि आवश्यक खाद्य पदार्थका बारेमा मदन लामिछानेको एक रिर्पोटː–
लोकामा गर्मि बाट हाम्रो शरीरलाई राहत दिने थुप्रै गुणहरु हुन्छन् । लौकामा पानीको मात्रा धेरै हुने भएकाले यसले शरीरलाई हाईड्रेट बनाइ राख्छ । रातीको खानामा लौका खाए पछि पानी कम खादा पनि डिहाईड्रशन हुदैन । यदि तपाई लाई गर्मिमा कुनै पनि खाना राम्रो सँग पच्दैन भने लौका खाँदम राम्रो हुन्छ । लौकाको तरकारी, कोरेर अचार तथा खिर बनाएर खान सकिन्छ ।
काक्रोमा पानीको मात्रा धेरै हुन्छ । यसलाई बेलुकाको खानामा खादा राम्रो हुन्छ । एउटा काक्रोमा ९६ प्रतिशत पानी तथा ४ प्रतिशत फाइबरको मात्रा हुन्छ । यसले पाचन पक्रियालाई मजबुच बनाउनुका साथै शरीरलाई डिहाईड्रेट हुन दिदैन ।
फर्सिमा पोटाशियम तथा फाइबर प्रसस्त मात्रामा हुन्छ । यसमा यस्ता गुण हुन्छन्, जसले सरीरलाई चिसो बनाई राख्छन् । गर्मिको समयमा रातीको खानामा यसलाई अवस्य सामेल गराउनुहोस् । फर्सि खानाले सरीरमा ब्लड सुगर पनि नियन्त्रित हुन्छ ।
घिरौला गर्मि महिनाका लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ । यसलाई खानाले पाचनक्रिया राम्रो हुनुका साथै यस सम्बन्धि कुनै रोग लाग्दैन ।
गर्मिको समयमा उसिनेको वा फ्राई गरेको आलु खानाले कुनै समस्या हुदैन । यसमा कार्बोहाइडे«ट हुन्छ । जसलाई पचाउन सजिलो हुनुका साथै गर्मि सँग लड्न पनि सहयोग पु¥याउछ । यसलाई खानाले निद्रा पनि राम्रो सँग लाग्छ ।
दहिमा प्रसस्त मात्रामा पोषकतत्वका साथै क्याल्सियम हुन्छ । रातीमा दहि खानाले पेटमा कुनै पनि प्रकारको समस्या आउदैन । दहिको सेवनले सरीर चिसो हुन्छ ।
स्वास्थ्य / जीवनशैली सम्बन्धित शीर्षकहरु
अमेरिका–युरोपका बालबालिकामा देखिएको हाइपर इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम भारतसम्म पुग्यो
कोरोना भाइरसबाट जोगिन कस्ता खानेकुरा खाने ? यस्तो छ खानपानबारे डब्लुएचओको पाँच टिप्स
भ्याक्सिन नबने मौसमी रोग बन्नेछ कोभिड–१९, २०२२ सम्म सर्तकता अपनाउनु पर्ने
कोरोना भाइरस कसरी सर्छ ? के के गर्दा सर्दैन ?
जनकपुर–ढल्केवर सडक खण्डमा मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा आमा–छोराको मृत्यु
कोरोना संक्रमणबाट अछाममा एक जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ३० पुग्यो
प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी ३ हजार ८ सय ५६ जना कोरोना संक्रमित
कर्जा भुक्तानी अवधि एक देखि ३ वर्षसम्म लम्ब्याउन नेपाली कांग्रेसको सुझाव
शाओमी नेपालमा रेडमी नोट ९ नेपालमा, यस्ता छन् विशेषता
मंगलबारदेखि शेयर बजार खुल्ने
भारतमा एकैदिन थपिए कोरोनाका करिब १७ हजार नयाँ संक्रमित, संक्रमित हुनेको संख्या चार लाख ७३ हजार
सैनामैनामा सवारी दुर्घटना, बाबुछोराको मृत्यु
अमेरिकामा एकैदिन ३४ हजारभन्दा धेरै नयाँ संक्रमित भेटिए
भाइबर एपको साथमा तपाईंको डाटा सदै सुरक्षित
शक्तिशाली इन्ट्री लेबल स्मार्टफोन रियलमी सी३ सार्वजनिक
रसुवामा ९ सहित ५५४ संक्रमित थपिए, ७७ वटै जिल्लामा फैलियो कोरोनाभाइरस
ललितपुरमा एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या २९ पुग्यो
थप ५९३ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ११ हजार ७५५ पुग्यो